iMac 2021 amin'ny vidiny 1.299 euro, AirPods Max amin'ny vidiny 509 euro ary tolotra hafa amin'ny Amazon an'ny vokatra Apple | Vaovao IPhone
Herinandro iray hafa dia ampahafantarinay anao ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny vokatra Apple izay misy amin'ny Amazon. Rehefa manakaiky ny datin'ny famolavolana ny laharana iPhone 13 vaovao, dia toa tsy liana amin'ny fanesorana ireo tahiry misy intsony i Apple ary, indray mandeha, tsy nahita tolotra hanasongadinana izahay.
Noho ny fifanarahana nifanaovan'i Apple sy Amazon tamin'ny fivarotana mivantana ny vokatr'izy ireo tamin'ny alàlan'ny sehatra e-varotra farany, mividy vokatra Apple miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana Miaraka amin'ny antoka mitovy amin'ny mahazatra dia zava-misy izany ary indraindray isika mahita tolotra izay tsy azontsika hadino.
Ny tolotra rehetra asehonay anao amin'ity lahatsoratra ity dia misy amin'ny fotoana famoahana. Azo inoana fa rehefa mandeha ny andro dia tsy ho misy intsony ireo tolotra na hiakatra ny vidiny.
Amazon dia mamela antsika vola ny fividianana ny vokatra rehetra azo apetraka eo amin'ny lampihazo misy ny vidiny eo anelanelan'ny 75 sy 3000 euro amin'ny andiany tsy misy zana-bola. Ny antsipiriany momba ny famatsiam-bola dia misy isaky ny lahatsoratra.
1 iMac 2021 amin'ny vidiny 1.299
2 iPad Air 2020 avy amin'ny 529 euro
3 Fitaovana IPad
3.1 Pensila Apple voalohany ho an'ny 2 euro
3.2 Mouse Bluetooth ho an'ny iPad amin'ny vidin'ny 13 euro
4 3 volana maimaim-poana amin'ny Amazon Music HD
5 Fitaovana IPhone
5.1 Tranga vita amin'ny hoditra MagSafe feno ho an'ny iPhone 12/13 Pro Max amin'ny 97 euro
5.2 Apple MagSafe Double Charger amin'ny vidiny 130 euro
5.3 AirPods andiany faharoa amin'ny vidiny 2 euro
5.4 AirPods andiany faha-2 miaraka amina tranga famandrihana tsy misy tariby amin'ny vidiny 169 euro
5.5 AirPods Pro amin'ny vidin'ny 175 euro
5.6 AirPods Max amin'ny vidiny 509 euro
iMac 2021 amin'ny vidiny 1.299
Ny fiovan'ny iMac nandrasana hatry ny ela dia tonga tamin'ny fiandohan'ity taona ity ary nanao izany tamin'ny fomba lehibe. Manolotra antsika ny iMac 2021 a Efijery 24-santimetatra misy famahana 4.5K miaraka amin'ny processeur M1 an'ny Apple izay misy ihany koa ao amin'ny laharana iPad Pro 2021.
Ity maodely ity dia manome seranana fanitarana roa, RAM 8 GB, fitehirizana 256 GB, Cases CPU 8 sy core GPU 7. Ny vidin'ny maodely mahazatra amin'ny manga dia 1.449 euro, na izany aza, azontsika atao mividy azy amin'ny Amazon amin'ny vidiny 1.299 euro fotsiny, izay maneho fitsitsiana 150 euro.
Vidio ny iMac 2021 miaraka amin'ny core CPU 8 sy ny core core 7 ho an'ny 1.299 euro
Ny maodely miaraka amin'i Cases CPU 8 sy core GPU 8, dia manana vidiny 1.669 euro, vidiny izay Mihena ho 1.399 euro izany any Amazon miaraka amin'ny habetsaky ny RAM sy ny fitahirizana kapila mafy.
Vidio ny iMac 2021 miaraka amin'ny core CPU 8 sy ny core core 8 ho an'ny 1.399 euro
iPad Air 2020 avy amin'ny 529 euro
Apple iPad Air 2020 (avy amin'ny ...
Raha toa ka tsy mahafeno ny filanao ny taranaka iPad sy iPad vaovao, ny safidy tsara indrindra anio, raha mandalo ny elanelan'ny Pro ianao dia ny iPad Air. Ny iPad Air 2020, misy efijery 10,9-inch sy fitehirizana 64GB, dia hita ao Amazon avy amin'ny 529 euro, izay maneho fihenam-bidy 18% amin'ny vidiny mahazatra.
Ao anatin'ny iPad Air 2020 dia ahitantsika ny processeur A14 Bionic, eo an-tampony ny sensor sensor amin'ny dian-tànana, mifanaraka amin'ny Apple Pencil an'ny taranaka faharoa ary misy vidiny mahazatra ao amin'ny Apple Store 2 euro.
Pink iPad Air misy tahiry 64 GB amin'ny vidiny 529 euro. Silver iPad Air misy tahiry 64 GB ho an'ny 626 euro. Sky Blue iPad Air misy tahiry 64 GB ho an'ny 611 euro.
Pensila Apple voalohany ho an'ny 2 euro
Apple Pencil (faha-2 ...
Raha te hahazo tombony betsaka amin'ny fahaiza-manaon'ny iPad Pencil izay atolotray antsika amin'ny iPad Air ianao dia azonao atao izany. amin'ny vidiny 126 euro. Ny vidiny mahazatra ao amin'ny Apple Store dia 135 euro, tsy fihenam-bidy lehibe izany, fa euro vitsivitsy azontsika angonina kosa tsy dia be loatra.
Vidio ny Pencil Apple voalohany ho an'ny 2 euro.
Mouse Bluetooth ho an'ny iPad amin'ny vidin'ny 13 euro
Bluetooth Mouse, Mouse ...
Raha tsy te handany vola be amin'ny totozy Bluetooth ianao izay miasa miaraka amin'ny bateria ihany koa, any Amazon dia manana totozy INPHIC izahay, totozy iray izay Misy vidiny 12,99 euroIzy io dia miasa amin'ny Bluetooth ary azontsika ampiasaina amin'ny solosaina ihany koa izy io satria mampiditra sensor iray hifandray amin'ny USB.
Vidio ny totozy Bluetooth amin'ny vidin'ny 12,99 euro.
3 volana maimaim-poana amin'ny Amazon Music HD
Tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra dia nampahafantatra anao izahay momba ny fampiroboroboana izay omen'ny Amazon ho an'ny mpampiasa rehetra hankafizany Amazon Music HD maimaimpoana, Ny sehatry ny mozika streaming an'ny Apple amin'ny famaritana avo.
Tsy misy io tolotra io ihany Hatramin'ny 23 septambra raha mbola tsy nankafy fanentanana sahala amin'izany ianao. Aorian'ny 3 volana dia 9,99 euro ny vidiny, mitovy amin'ny Apple Music ny vidiny. Raha te hifanaraka amin'ity serivisy ity ianao ary misoratra anarana alohan'ny hanombohan'ny fe-potoana karama, azonao atao izany amin'ny alàlan'ny Ity rohy ity.
Tranga vita amin'ny hoditra MagSafe feno ho an'ny iPhone 12/13 Pro Max amin'ny 97 euro
Raha reraky ny mitondra ny iPhone-nao hiarovana ny lamosina fotsiny ianao ary tianao ny mankafy ireo fitaovana fanamboarana ampiasain'i Apple nefa tsy atahorana handatsaka azy io, Apple dia manome anay ny tranga vita amin'ny hoditra, fonony toy ny ba kiraro (mba hifankahazoantsika) izay ahafahantsika mitondra ny iPhone 12/13 Pro Max miaraka amin'ny fiarovana sy fiarovana tanteraka.
Es mifanaraka amin'ny teknolojia MgSafe, noho izany dia tsy mila esorinay avy eo amin'ny raharaha izy io vao hitory izany. Ho fanampin'izany, ny fampidirana paosy kely anatiny hitahirizana carte de crédit, antontan-taratasy famantarana ary koa fehy hananana azy io hatrany. Eo aloha dia manana toerana hijerena ny ora na iza no miantso antsika.
Ny vidiny mahazatra amin'ity tranga tsy mitongilana ity dia 149 euro, fa afaka isika ento any Amazon amin'ny vidiny 97 euro izy.
Mividiana tranga vita amin'ny hoditra feno amin'ny iPhone 12/13 Pro Max.
Ity fonony ity dia azo jerena amin'ny loko mitovy, volomparasy ho an'ny iPhone 12 sy iPhone 12 Pro amin'ny vidiny 92 euro.
Vidio ny hoditra feno iPhone 12 sy iPhone 12 Pro feno.
Apple MagSafe Double Charger amin'ny vidiny 130 euro
Raha mitady charger fitsangatsanganana ho an'ny Apple Watch sy iPhone 12 ianao, ny vahaolana atolotry ny Apple antsika dia ny charger Double MagSafe, charger izay aforitra mba hampihenana ny toerana onenany ary hitondrany azy mora foana. Ny vidiny mahazatra amin'ity charger ity, izay tsy mampiditra ny adaptatera herinaratra, dia 149 euro, fa azontsika atao any Amazon izany. 130 euro fotsiny.
Vidio ny Apple MagSafe Double Charger amin'ny vidiny 130 euro.
AirPods andiany faharoa amin'ny vidiny 2 euro
Apple AirPods misy tranga ...
Ny AirPods dia mbola iray amin'ireo vokatra Apple atolotray antsika sandam-bola tsara indrindra amin'ny Amazon. Herinandro iray hafa dia afaka mahita ny AirPods andiany faha-2 isika miaraka amina tariby mitondra tariby amin'ny tariby misy herinaratra ao aminy vidiny ambany indrindra: 105 euro. Ny vidiny mahazatra an'ireo headphone ireo dia 179 euro.
Mividiana AirPods andiany faha-2 miaraka amin'ny tratra fandrefesana amin'ny vidiny 105 euro.
AirPods andiany faha-2 miaraka amina tranga famandrihana tsy misy tariby amin'ny vidiny 169 euro
AirPods faharoa-gen miaraka amina tranga tsy misy tariby koa dia nahatratra ny sarany ambany indrindra amin'ny Amazon ary azontsika atao ny mihazona azy ireo 169 euro fotsiny. Ny vidiny mahazatra ao amin'ny Apple Store dia 229 euro.
Vidio AirPods andiany faha-2 miaraka amin'ny tranga tsy misy tariby amin'ny vidiny 169 euro.
AirPods Pro amin'ny vidin'ny 175 euro
Toy ny zandrin'izy ireo kely, ny AirPods Pro dia misy ihany koa any Amazon, miaraka amin'ny fihenam-bidy 37% amin'ny vidiny mahazatra 279 euro. Ho an'ny 175 euro fotsiny, azontsika atao ny mahazo ny AirPods Pro amin'ny Apple, mamonjy antsika 104 euro amin'ny vidiny mahazatra ao amin'ny Apple Store.
Vidio ny AirPods Pro amin'ny vidiny 179 euro
AirPods Max amin'ny vidiny 509 euro
Apple AirPods vaovao MAX -...
Apple's AirPods Max dia misy ihany koa any Amazon miaraka amin'ny fihenam-bidy 19% mahaliana amin'ny vidiny mahazatra 629 euro. Amin'ny Amazon dia misy, amin'ny loko rehetra amin'ny vidiny 509 euro.
Na dia marina aza izany tsy ny vidiny ambany indrindra ara-tantara izany, izay 499 euro roa herinandro lasa izay, ny fihenam-bidy dia tena mahaliana ary tolotra azonao taraina ary tsy nahatratra ilay teo aloha ianao.
Vidio ny AirPods Max amin'ny loko 509 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » iMac 2021 amin'ny vidiny 1.299 euro, AirPods Max amin'ny vidiny 509 euro ary tolotra hafa amin'ny Amazon an'ny vokatra Apple
Nilaza i Kuo fa ny baikon'ny iPhone 13 dia lehibe kokoa noho ny 12, ankoatra izay dia hanohy hanana tahiry kely izahay